Qilaaf ka taagan masaajida Stockholm | Somaliska
Waxaa qilaaf xoogan ka taagan yahay qorsheyaal Masaajid cusub looga dhisi lahaa xaafadaha Rinkeby iyo Tensta sida uu qoray wargeyska SvD. Muslimiinta ku nool xaafadaas ayaa tartan ugu jira sidii ay ku dhisi lahaayeen dhowr masaajid oo is qilaafsan. Maamulka magaalada ayaa horey u ogolaaday in Masaajid weyn laga dhiso xaafadaha Rinkeby iyo Tensta taasoo qorshahu ahaa in uu mideeyo bulshada halkaas ku nool, balse arintaas ayaa la sheegay in ay qilaaf abuurtay. Masaajidka Rinkeby ayaa waxaa qorshihiisa wada ururka lagu magacaabo Islamiska förbundet i Järva oo sheegay in ilaa hada aysan soo ururin qarashka ku baxaya dhismaha oo gaaraya 100milyan oo karoon. Masaajidka laga dhisayo Tensta ayaa la sheegay in ay maalgalinayaan Sacuudiga. Mashruuca masaajidka Rinkeby iyo Tensta ayaa ogolaansho ka helay maamulka Stockholm balse waxaa hada soo baxay qorshayaal lagu dalbanayo in 5 masaajid laga dhiso deegaanka. "Dadka ku dhaqan Rinkeby iyo jaaliyadaha lagama qeyb galin mashruuca. Ururada ayaa dalbanaya in ay ka guuraan dhismaha hada Masjidka u ah markii masaajidka weyn la dhiso" ayay tiri Ann-Margarethe Livh oo ka tirsan xisbiga Vänsterpartiet oo degan xaafada Rinkeby. Ururada kale ee hada dalbaday in ay masaajid iskood u dhistaan ayaa waxaa ka mid ah ururka lagu magacaabo Islamiska kulturföreningen iyo kan ay leeyihiin turkida svensk-turkiska kulturföreningen i Rinkeby oo iyagu sheegay in aysan ka soo horjeedin in ay Masaajid dhistaan ururada kale balse aysan wax xiriir ah kala dhaxeyn iyaga. Ururka Turkida ayaa ku doodaya in ay doonayaan in ay dhisaan goob aan diin ku saleysneyn balse masaajid leh oo hawlo kale lagu qabto oo la xiriira isdhexgalka. Si kastaba ha ahaatee Mayorka xaafada Joakim Larsson ayaa soo dhaweynaya qorshayaasha ururada kale duwan isagoo sheegay in aysan jirin wax ka hor istaagaya in ay sameeyaan qorshayaashooda. Qilaafka ka jira bulshada ku nool xaafadaha Rinkeby iyo Tensta oo qeyb ay ku leedahay Soomaalida halkaas ku nool ayaa wajigabax ku ah Muslimiinta wadanka Sweden iyagoo ku heshiin la in ay dhistaan goobaha rabi lagu caabudo, maxay kaloo ka heshiinayaan? SvD
Waxaa qilaaf xoogan ka taagan yahay qorsheyaal Masaajid cusub looga dhisi lahaa xaafadaha Rinkeby iyo Tensta sida uu qoray wargeyska SvD. Muslimiinta ku nool xaafadaas ayaa tartan ugu jira sidii ay ku dhisi lahaayeen dhowr masaajid oo is qilaafsan. Maamulka magaalada ayaa horey u ogolaaday in Masaajid weyn laga dhiso xaafadaha Rinkeby iyo Tensta taasoo qorshahu ahaa in uu mideeyo bulshada halkaas ku nool, balse arintaas ayaa la sheegay in ay qilaaf abuurtay.
Masaajidka Rinkeby ayaa waxaa qorshihiisa wada ururka lagu magacaabo Islamiska förbundet i Järva oo sheegay in ilaa hada aysan soo ururin qarashka ku baxaya dhismaha oo gaaraya 100milyan oo karoon. Masaajidka laga dhisayo Tensta ayaa la sheegay in ay maalgalinayaan Sacuudiga. Mashruuca masaajidka Rinkeby iyo Tensta ayaa ogolaansho ka helay maamulka Stockholm balse waxaa hada soo baxay qorshayaal lagu dalbanayo in 5 masaajid laga dhiso deegaanka.
“Dadka ku dhaqan Rinkeby iyo jaaliyadaha lagama qeyb galin mashruuca. Ururada ayaa dalbanaya in ay ka guuraan dhismaha hada Masjidka u ah markii masaajidka weyn la dhiso” ayay tiri Ann-Margarethe Livh oo ka tirsan xisbiga Vänsterpartiet oo degan xaafada Rinkeby.
Ururada kale ee hada dalbaday in ay masaajid iskood u dhistaan ayaa waxaa ka mid ah ururka lagu magacaabo Islamiska kulturföreningen iyo kan ay leeyihiin turkida svensk-turkiska kulturföreningen i Rinkeby oo iyagu sheegay in aysan ka soo horjeedin in ay Masaajid dhistaan ururada kale balse aysan wax xiriir ah kala dhaxeyn iyaga.
Ururka Turkida ayaa ku doodaya in ay doonayaan in ay dhisaan goob aan diin ku saleysneyn balse masaajid leh oo hawlo kale lagu qabto oo la xiriira isdhexgalka.
Si kastaba ha ahaatee Mayorka xaafada Joakim Larsson ayaa soo dhaweynaya qorshayaasha ururada kale duwan isagoo sheegay in aysan jirin wax ka hor istaagaya in ay sameeyaan qorshayaashooda.
Qilaafka ka jira bulshada ku nool xaafadaha Rinkeby iyo Tensta oo qeyb ay ku leedahay Soomaalida halkaas ku nool ayaa wajigabax ku ah Muslimiinta wadanka Sweden iyagoo ku heshiin la in ay dhistaan goobaha rabi lagu caabudo, maxay kaloo ka heshiinayaan?
mucjiso Rabaani ayaa hesata umada somaliyeed ee aan halmar wada istagno oo cafis waydisano ALLAH
asc waa arin lala yaabo hadii wax kasta la hor istaag hadana ma beedka alle ayaa hor istaagteen war rabigiin ka cabsada
maa han arin cusub. waa arin lug ku leh khilaafak ka jirra soomaaliaya. waxaad arkaysaa culumi aad u taageeray dawladdi hore haddana tan ka soo horjeeda balse taageeraya mucaaredkeda oo xaalkooda ilaah ogyahay intaba diin ayaa laguugu salayn waa yaab.
waligaa ma aragatay culumi geed gaaban iyo midh dheerba u fuulaya sidii ay u joojin lahaayeen masaajid. sabatoo ah fikirkooda ayuu ka soo horjeedaa oo is dhexgalka iyo nabad kunoolaan shaha ayaan laysu ogalayn